Dowladda Federaalka oo uu soo Wajahey Cadaadis Caalami ah oo ku aadan Dacwada Wariye Cabdicasiis Koronto iyo Dadka kale ee la xiran
Xasan Shire Shiikh “Markii hore ayaa Dacwdaan Madaxeedii Majo loo rogey marka waxaa ku talinayaa …. ”Dowladda Federaalka waxay dooneysaa in Shaarkeeda uu u Caddaado, Hayada ku lugta leh Dacwdaan waxay Dooneysaa in ay Nadiif ka noqoto Kiiskaan, halka Booliiskuna uu doonayo in isna Shaarkiisa u Caddaado, marka waxaa meesha ku dhibaateysan waa…” Waxaa maanta oo Talaado ah Taariikhduna...
Dhulweynaha shiinaha: arayda iyo ganacsatada Somaliyeed iyo xiriirkii umadaha somalida iyo shinayska waqti fog iyo mid dhow.
WAXBARASHADA ARDADA SOMALIDA EE DALKA SHIINAHA Burburkii dawladeenii waxaa la burburay dhamaan adeegyadii bulshada. waxaa kamida meelaha dhaawucu garay waxbarashada dalka .waxaana gaaray dhawac ayasan ilaa hada sidiilarabay iyo si udhow uga soo kabsan ururo iyo dad sigaara isku xilqaamay danagaarana mideeyeen ayaa melabadan oo dalka kamida kabilaabay inay soo celiyaan waxbarashadii aasaasiga ahayd...
Maxamed Axmed Maxamuud oo Dadka u yaqaanaan (Maxamed Indhool) waxaa uu ku dhashay Indhoolanimada, hasa yeeshee waxaa uu u istaagay sidii uu dadka kale uu ula mid noqon lahaa waliba dhanka Waxbarashada. Maxamed waxa uu Bachelor- kaga soo qaatay Magaalada Muqdisho,kadibna Shahaadada Masterka ayuu hadda ka qaatay Jaamacad ku-taal Dalka Sudan oo lagu magacaab International Ifriiqiya University waxaana...